Yini i-Miniature Husky futhi kungani wonke umuntu eyifuna? - Izinhlobo
Yini i-Miniature Husky futhi kungani wonke umuntu eyifuna?
Ama-Huskies ayizithandwa zomhlaba wezinja! Wonke umuntu ukhathazekile ngokubukeka kwakhe okufana nempisi. Kepha, akuwona wonke umuntu ongathola iHusky esezingeni elilinganiselwe. Yingakho i-Miniature Husky ikhona!
Okuncane akusho ukuthi kulula ukuphatha , noma kunjalo. Ziyadlala, kanti ngenkathi abantu bezithola njengabangane, ziseyizinja ezisebenza ngamandla amakhulu.
Hlangana noHusky Omncane
Ukulungele ukufunda okwengeziwe ngalokhu kwehluka okuthandekayo kweSuskyan Husky?
Yadalwa kanjani i-Miniature Husky?
UHusky wakho omncane uzoba muhle futhi abe muhle
Isimo: Ingabe ama-Mini Huskies afuyiwe?
UHusky Miniature okhathele ungumngane ojabulayo
Izinkinga zempilo i-Husky yakho encane engaba nayo
Malini ama-Husky ama-Miniature?
Umhlobo lo wakhiqizwa ngeminyaka yabo-1990s nguBree Normandin. Wabadala ngokuzalanisa amaHuskies amancane (noma ama-runts) ndawonye.
Imijikelezo yokuzala ingaba yingozi uma yenziwa ngabafuyi abangenasimilo . Lokhu kungenxa yokuthi ama-runt abuthakathaka kakhudlwana kukadoti, kanti izinja ezibuthakathaka zikhiqiza amazinyane abuthaka.
Kwesinye isikhathi bangakhula babe nempilo njengabo bonke abanye odoti. Uma lezi zinja zisetshenziselwa ukuzalanisa, kungenzeka ukuthi uthole amazinyane anempilo.
Banofuzo olufanayo neHusky ejwayelekile. Badubula baduma ku Ngo-1925 lapho amaSulumane amabili aseSiberia - UBalto noTogo - basindise idolobha lase-Alaskan esiwubhadane. Njengoba zizalaniswa njengezinja ezihlotshisiwe, akumangalisi ukuthi zithanda ukugijima.
Ngabe zihlobene ne-Alaskan Klee Kai?
Cha, abekho, kepha i- I-Alaskan Klee Kai isithombe esikhafula se-Miniature Husky. Zinezici ezifanayo ezinhle, izindlebe eziqondile, nephrofayili yokuziqhenya.
Baze babe nejazi elilinganayo eliphindwe kabili elikhipha kakhulu.
Hlangana ne-Alaskan Klee Kai
Zingabukeka zifana neHusky, kepha iKlee Kai incane kakhulu.
Futhi banokuhlukahluka okuningi kombala, ngoba akuyona inja emsulwa. Kodwa-ke, ziye zaziwa yi-UKC kusukela ngo-1997.
U-Linda Spurlin wazithuthukisa ngawo-1970s lapho ethola ukuthi ama-Huskies angaba mncane.
Zikhuliswe edolobheni elincane e-Alaska elibizwa ngeWasilla, lezi zinja zaqanjwa ngokuthi 'inja encane' ngolimi lwase-Alaska.
Ungabathola ngosayizi abathathu:
Okujwayelekile - 15 inches to 17 inches (38 cm to 43 cm) kanye 16 to 22 lbs (7kg to 10 kg)
Okuncane - amasentimitha ayi-13 kuye kumasentimitha ayi-15 (amasentimitha angama-33 kuye kuma-38 cm) nama-10lbs kuya kuma-20lbs (4.5kg kuya ku-9kg)
Ithoyizi - Lincane kunamasentimitha ayi-13 (33cm) futhi lizungeze ama-7lbs kuye ku-12lbs (3kg kuye ku-5kg)
Lezi zinja zivame ukuthengiswa njenge- 'Mini Huskies', kodwa awawona amaHuskies aseSiberia amsulwa .
Obunye ubuzali babo buvela ku I-Schipperke , inja yezimvu encane evela eBelgium. I- I-American Eskimo is spitz fluffy ebukeka njengePomeranian ekhule ngokweqile.
Njengoba inezakhi zofuzo ezahlukahlukene kangaka, i-Alaskan Klee Kai ayithambekele kakhulu ezindabeni zezempilo. Baziwa ngokuhlala iminyaka engaba li-15 ukuya kwengama-20.
Ngenkathi beyeka ukukhula cishe eminyakeni emibili ubudala, uzokwazi ukunquma usayizi wabo omdala lapho unonyaka owodwa.
Banamahloni futhi bangabesaba abantu abangabazi . Kodwa-ke, lokhu kubenza babe yizinja eziqaphe kangcono ngenxa yokuphepha kwazo. Bayazikhetha futhi ngeke babophele wonke umuntu - ngisho amalungu omndeni wakho.
Futhi, azishibhile futhi ziza nxazonke $ 1,500 kuya ku- $ 3,000 ngamunye.
Zifana namaHusky asezingeni elilinganayo anezici ezifana nezempisi namehlo e-alimondi. Imisila emikhulu eshubile esiza ukuyigcina ifudumele lapho kubanda.
Ama-Husky amancane nawo abelana ngombala ofanayo nowabafowabo abakhulu. Ungalindela Okumnyama, Okumhlophe, Okubomvu, uSable, i-Agouti noma ingxube yanoma yikuphi okubili. Ungayithola eyodwa enezimpawu ezingajwayelekile noma ezihlukile.
Amehlo abo ahlaza okwesibhakabhaka awakhohlakali kodwa angaba futhi namehlo ansundu afudumele. IHeterochromia nayo ivame kakhulu lapho uzoba nombala ohlukile weso ngalinye. Kwesinye isikhathi uzoba nemibala emibili esweni elilodwa.
Ama-Husky amancane athola kangakanani?
Njengoba ingekho indinganiso yezinhlobo ezilawulwayo, usayizi wazo ungahluka impela. Bangakwazi ukukala noma yikuphi kusuka 15 kuye ku-35 lbs (7 kuya ku-16 kg). Ngokuphakama, bavame ukuba seduze Amasentimitha ayi-12 kuye kwayi-17 (30 to 43cm) amasentimitha ubude.
Lokhu kubenza bacishe babe ngama-42% amancane kunoHusky osayizi ojwayelekile.
Ungabagcina bengaphandle noma endlini kodwa uqiniseke ukuthi abakwazi ukubaleka. Qaphela kakhulu njengoba amaHuskies engabaculi bokuphunyuka abangokwemvelo, ngisho nabancane. Bheka ukuphunyuka kuka-Odin ebhokisini lakhe elingezansi:
Izindlu ezinamagceke afakiwe zihamba phambili kuzo. Ungabagcina ngisho nasefulethini. Kepha ungakhohliswa ngosayizi wabo omncane, badinga imisebenzi eminingi yokukhuthaza neyangaphandle.
Zingezinye zezinhlobo ezimbi kakhulu zezinja zabaguliswa ukungezwani komzimba
Ama-Husky ama-Miniature asongwe kabili ngakho-ke ungalindeli ukuthi yi-hypoallergenic. Eqinisweni, bangabachasi abadumile.
Yini enye, amajazi abo aqhuma kabili ngonyaka . Lokhu kusho ukuthi balahlekelwa yicansi labo lonke.
Ngaphandle kokubangela ukungezwani komzimba, uzozithola ususa itekisi njalo. Futhi, ungahle ube ne-roller roller noma ezimbili kuwe ngaso sonke isikhathi. Yileyo ndlela lolu hlobo lungachitha ngayo.
Ama-Huskies awuhlobo oluzimele olunomqondo wawo. IMini Husky ayihlukile. Zingaba yinto ehlekisayo futhi engenangqondo. Benza nabangane kalula, okwenza bangakulungeli ukuba yizinja zokugada.
Iqiniso elijabulisayo: Ukuze wakhe inja ephelele yesihlibhi, abalimi bakhetha izinja ezidlala kakhulu zokuzalisa . Lokhu kudale inja ethambile.
Uzobona ukuthi bayakuthanda ukunakwa. Bathandana kakhulu, bayabenza isilwane somndeni esiphelele . Manje, ukuthi zincane, akusho ukuthi ungabashiya nezingane ezincane. Bangalimala noma balimaze izingane ngokuzigxumela kubo benenjabulo.
Uma unezilwane ezifuywayo ezincane, uzofuna ukuhlanganyela neMini Husky yakho ukuvimbela idrayivu yabo yokuqola ukuthi ingabonakali. Baziwa ngokujaha onogwaja namakati (kepha ngokuhlangana kahle nabantu, bangaba ngumngani wabo futhi!)
Bayakujabulela ukuphonswa inselelo nokuphonsela inselelo abanikazi babo . Lokhu kubenza babe nekhono lokweqa ngegebe elincane kakhulu, ikakhulukazi ngenxa yobukhulu babo.
AmaHuskies awakhonkothi kepha azoziveza ngokuhhewula. Abanikazi be-Husky bayathanda ukuqeqesha ama-pooches abo ukuthi 'Ngiyakuthanda' neminye imishwana emnandi. Xwayiswa nokho, bangazwakala impela. Njengokukhala ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, ubusuku bonke.
Bheka uKoda, uHusky omncane, ozwakalisa injabulo yakhe enganqamuki kusiqeshana esingezansi!
Bahlakaniphe kakhulu udinga ukubakholisa ukuthi bakulalele
Zilungiselele ukuvivinywa yile nja enhle kakhulu. Sishilo ukuthi bayathanda ukuphonsela inselelo abanikazi babo.
Yize bekhaliphe kakhulu, akulula ukuqeqesha. Kungani? Ungasho ukuthi bahlakaniphe kakhulu ukwenza. Kodwa-ke, uma uqala usemncane futhi uhlala ungaguquguquki, uzothola ukuthi ukusebenza kwakho kanzima kunomvuzo.
Qiniseka ukuthi gcina izikhathi zakho zokuqeqesha zifushane futhi zimnandi ngoba balahlekelwa inzalo kalula. Yiba nama-mini-sessions amaningi usuku lonke.
Zama ukuwagcina cishe imizuzu engu-5 noma ume lapho ubona ukunaka kwakhe kuzula.
Zifanele kangcono abanikazi bezinja abanolwazi. Uma ungumnikazi wokuqala futhi ufile ku-Mini Husky, ungazama amakilasi okulalela.
Ama-Huskies amancane afana nezinsana eziphakeme ezisebenzisa ushokoledi noswidi. Abasoze aguga ngaphambi kwakho . Uzozithola utshala isikhathi esiningi namandla kumngani wakho onoboya ukuze amgcine ejabule.
Uma ungakwazi ukuchitha isikhathi esiningi naye, noma uma ezizwa enesithukuthezi, uzoba nenja ebhubhisa kakhulu ezandleni zakho.
Banike ukudlala okuningi bese uvumela ukuba BAQHUBE!
I-Husky encane edlalwayo
AmaHuskies azalelwa ukugijima. Lezi yizinja zemidlalo futhi zidinga ukuzivocavoca okuningi. Kufanele uhlose Imizuzu engama-60 kuya kwengu-120 ngosuku ukubakhuthaza ngokomzimba noma ngokwengqondo.
Umsebenzi omuhle wenu nobabili uhamba ngebhayisikili. Vumela ukuthi agijime eceleni kwakho ngenkathi uhamba ngebhayisikili, egqoke i-harness kanye neash.
Lezi zinja zingazuza ezifundweni ze-rally, ze-agility nezokulalela. Okunye ukukhetha okusobala kungaba ukuqeqeshwa ngesihlibhi noma ukujaha inja. Kodwa-ke, qaphela ukuthi akufanele zisetshenziswe ku-sledding yangempela ngenxa yobukhulu bayo nomzimba omncane!
Kufanele uhlale uwagcina njalo, noma ngabe kuhle kangakanani ukukhumbula kwabo ngoba bazalelwe ukugijima. Ngeke wazi ukuthi isifiso sokugijima sizobathola nini.
Lapho ziqala ukugijima, zizoqhubeka nokugijima zize zizishe. Imvamisa, lokhu kubangela ukuthi balahleke futhi badideke.
Kube khona izehlakalo zokuthi uHuskies avele abaleke futhi leso yisikhathi sokugcina lapho abanikazi babo bababona khona . Kukhona nezibonelo zamaHuskies abaleka ngoba ezabo izidingo azifezekiswa , nabo bazobaleka.
Uma une-Husky Encane, uzothola uboya yonke indawo
Njengoba bazalelwa amakhaza ase-arctic, amajazi abo aminyene kakhulu. Ungagcina uboya babo bungangeni ngokuwaxubha kabili ngeviki . Uma ufuna ukunciphisa ukuchitheka, ungahle udinge ukuwaxubha nsuku zonke .
Akudingeki ubageze ngoba bazogeza ngokwabo. Amadoda athanda inhlanzeko futhi ungahle ubabone bezihlanza njengekati. Okuwukuphela kwesikhathi okufanele uzigeze ngaso lapho sezinodaka.
Ungalokothi uziphuce ehlobo , badinga amajazi abo ukuze bavikeleke. Amajazi abo ahlinzeka ngokuvikelwa ekushiseni nasemakhazeni.
Ukudla okulungile kweHusky Encane
TO ukudla okunamafutha amancane kanye ne-carb ephansi ilungele iMini Husky. Ungamphakela nokudla okuluhlaza uma kuvumelana nendlela ophila ngayo.
Kodwa-ke, siyazi ukuthi i-dog kibble iyona elula kakhulu. Uma ukhetha le nketho, qiniseka ukuthi uhamba nenamba ephezulu yezinja eyenzelwe izinja ezisebenzayo.
Izinkomishi ezimbili ngosuku kwanele futhi kufanele ubanikeze ukudla amahora amabili ngaphambi kokuzivocavoca kanye nemizuzu engama-30 ngemuva.
Azinqunyelwe ukuthi zidle ngokweqile kepha kungenzeka. Khumbula ukuthi lezi zinja ekuqaleni zazizalelwa izinja zezihlibhi futhi zingadla Amakholori ayi-10 000 ngosuku .
Kufanele njalo uqiniseke ukuthi banamanzi ikakhulukazi uma isimo sezulu sishisa.
Khumbula, lapho sondla izilwane ezifuywayo, ukudla kwazo kanye nenani lokudla esikunika zona kufanele kususelwe eminyakeni yabo, ubukhulu, izinga lomsebenzi, kanye nempilo.
AmaMini Huskies ngokuvamile anempilo Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14 . Ukuzalanisa ngokweqile kungenza iMini Huskies ithambekele kakhulu ezinkingeni zokuphefumula, izifo ze-ocular, i-dwarfism, i-intervertebral disc disease (IVDD) ne-dystocia.
Ama-Huskies izinja ezinempilo kepha ezinye izifo ezijwayelekile zofuzo ezibathintayo:
Isimo se-thyroid esizoshiya i-Miniature Husky lethargic yakho. Kuzobenza nokuthi bangakuthandi ukuzivocavoca umzimba. Imvamisa, ubengeke akubekezelele ukubanda. Kungakuhle uma ungavivinya inja yakho njalo eminyakeni emibili ukuyivimba ukuthi ingakhuli.
Lesi sifo sibanga ukulahleka kwezinwele noma isikhumba esinamaxolo. Lapho uxubha izinwele zakhe, naka isimo sesikhumba sabo. Uma ubona noma yikuphi ukungahambi kahle noma ukulahleka kwezinwele, bheka udokotela wezilwane ngokushesha ukuze uvimbele ukulimala okuqhubekayo.
Ukuqhubekela phambili kwe-retrophy atrophy kanye ne-cataract kungadala ukungaboni. Hlola iso lenja yakho njalo ukuthola noma yiziphi izimpawu zokuba mnyama noma uketshezi. Izinkinga zamehlo zivame kakhulu kwabesilisa.
Lokhu kuyinkinga ngomphimbo obangela ubunzima bokuphefumula. Izindaba ezimnandi ukuthi kuvame ukukhula kuphela ngemuva kweminyaka eyishumi. Lesi simo siqhubeka kancane kancane kangangokuba iziguli zivame ukudlula isikhathi .
Ama-Husky amancane anama-litter amakhulu! Cabanga imidlwane engu-9 kuye ku-11. Kepha zibiza kakhulu futhi zingasuka $ 600 kuya ku- $ 3000 ngamunye.
Hlangana noZoe, umdlwane kaMini Husky - Umthombo wesithombe
Qiniseka ukuthi uqonda kahle ukuthi ubhaliselani ngaphambi kokuthola eyodwa. Ukuntula ukuqonda yisona sizathu esenza izinja zithunyelwe endaweni yokukhosela.
Ama-Huskies awalungile kubanikazi bokuqala. Bafuna nesikhathi esiningi nokubekezela.
Kunzima ukuthola ama-Miniature Husky Huskies angahlanganisiwe nohlobo oluhlukile. Uma ukhetha uhlobo olwaziwa nge-AKC oluncane kepha lubukeka futhi lisebenze njengeHusky ebabazekayo, zama Keeshond .
Uma ungenankinga namamiksi, i- UPomsky kungenye indlela ethandwayo
Abalimi abancane bakaHusky
Ukuthenga izinja 'ezincane' noma 'teacup' kuyingozi. Ngokuvamile awekho amazinga asemthethweni ngoba awaziwa yi-AKC. Ama-teacups enzelwa kakhulu inzuzo ngoba ngubani ongafuni injanyana yaphakade?
Injana encane enhle ye-Husky - Umthombo wesithombe
Ngakho-ke umthola kanjani umfuyi omuhle? Ngeke benqene ukukukhombisa izindlu zabo zezinja noma imfuyo yokuzalanisa. Qaphelani abalimi abangakwazi ukunikhombisa nina nobabili abazali.
Futhi, qiniseka ukuthi awuweli kumkhonyovu . Abanye abalimi abangenasimilo bazobanga ukuthi izinja zabo zingama-Huskies amsulwa.
Iqiniso ngukuthi kungenzeka ukuthi bawela ngolunye uhlobo oluncane.
IPomsky ingenye ye-hybrid enjalo, i-Alaskan Klee Kai enye.
Bheka i- UKolu Husky - imakethwa njengeMini Husky - exutshwe ne-American Eskimo ne Samoyed .
Kukhona nezimo zabazalanisi abaqamba amanga cishe ngeminyaka yemidlwane yabo. Lokhu kuholela kubanikazi abathukile amaMini Huskies abo okuvela ukuthi angamaStandard Huskies! Kukuwe ukuthi wenze ucwaningo lwakho bese uthola umfuyi onethezekile naye.
Owokuqala kulolu hlu nguBree Normandin ongumfuyi ophayona weMini Huskies:
Ama Huskies AmaSiberia amancane (IHendersonville, NC)
UCanine Corral (Isiteshi saseHuntington, NY)
I-Husky Encane yokutholwa: Gcina i-pup engafuneki
Njengoba i-Huskies ithandwa kangaka, abanye nakanjani bashiywa ezindaweni zokukhosela. Njengoba kushiwo ngaphambili, ikakhulu kungenxa yabanikazi bokuqala abangazange babone ukuthi bangakanani umsebenzi abawenzayo.
Izinto ezimbili ezinhle ngokuthola ukutakulwa: isilwane esingenakhaya sithola ikhaya futhi wazi kahle ukuthi uthola ini.
Akukho ukutakula okukhethekile kuma-Miniature Huskies ngoba akuvamile. Ungaziseshela ezindlini zokukhosela izinja eziboshwe ngesihlibhi noma amaSkyeri Huskies esikhundleni salokho:
Ukutakulwa Kwezinja ZaseNyakatho California (I-Walnut Creek, CA)
Imisila yeTundra Siberian Husky Rescue (Horsham, PA)
Ingabe i-Miniature Husky yakho?
Uma ungumuntu othanda ukudlala noma othanda ezemidlalo, lokhu kuyinja yakho nje. Uzoba ngumlingani wakho ofana nesifiso sakho sempilo nothando lwabantu.
Kodwa-ke, uma ungakwazi ukuma uboya noma ukukhala, ungahle ufune olunye uhlobo. I-Miniature Husky idla isikhathi, inonya futhi idinga isandla esiqinile kodwa esimnene.
Mtshengise inhlonipho emfanele futhi uzokuvuza ngothando nokuthembeka.
Unqume ini? Ngabe uthola i-Miniature Husky noma mhlawumbe enye inhlanganisela yaseSiberia Husky? Sitshele imicabango yakho ngokushiya amazwana ngezansi.
I-Black Mouth Cur: Konke Okufanele Ukwazi Nge-Southern Cur Dog
Yiziphi izinhlobo zezinja zaseJapan ezithandwa kakhulu?
kungani izinja ziqotho kangaka
ngazi kanjani ukuthi nginenja enjani
inja yami yomile iyahamba kepha ayilahli
izinhlobo zama-pit bull amagama